Miankina amin’ny HCC ny raharaha | NewsMada
Miankina amin’ny HCC ny raharaha
Nametraka taratasy fiandry eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny 5 avrily, ireo depiote ho an’ny fanovana miisa 73, nitsipaka ny fandaniana amboletra ny lalàm-pifidianana… mampikorontana. Eo koa ny fangatahan’izy ireo ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Repoblika, ny 15 avrily, fa tsy voajoro 12 volana taorian’ny fianianany ny Fitsarana avo (HCJ).
Hatramin ’izao, tsy hita izay valiny… Mandra-pahoviana? Any amin’ny HCC ny mason’ny maro, miandry ary mitaky ny fitsarana marina sy tsy mitanila ny amin’izany. Tena misy sy iainana ny fisaraham-pahefana? Saika eo ambany vahohon’ny fahefana mpanatanteraka, na ny mpanao lalàna na ny mpitsara. Mampiahiahy sy mahabe resaka ny maro ny fisian’ny kolikoly avo lenta isaky ny mihetsika.
Mitohy hatrany ny tsy fanajana lalàna; eny, na ny fampanjakan’ny HCC izany aza. Nahabe adihevitra, ohatra, ny fomba fanendrena praiminisitra, tsy araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana. Eo koa ny And. 72 milaza ny amin’ny tsy fahazoan’ny depiote miova vondrona politika ankoatra izay vondrona nahavoafidy azy; raha tsy izany, aongana. Vitavita sy tsy hitahita ho azy ny raharaha.
Ny tokony hanaovan’ny filohan’ny Repoblika sy ny Antenimierampirenena fifanarahana andraikitra ny fanapahan-kevitry ny HCC, ny 12 jona 2015, manoloana ny fampiatoana ny filohan’ny Repoblika. Sanatria, kolikoly isaky ny mihetsika ny hoe fifanarahana? Na mitohy ny fahalovana… Eo an-tanan’ny HCC ny raharaha. Matoa miandry ny maro, tsy mbola very tanteraka ny fahatokisana: ala nenina…
Sanatria, ho lasa faobe ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fahalovana noho ny kolikoly? Aim-pirenena izao. Tsy azo tamoraina ho vitavita ho azy, nefa tsy azo hasarotina na tarazohina koa… Tompon’antoka amin’izay ho tohin’ny raharaha ny HCC, na ho filaminana na ho korontana. Efa mikorontana izao ny fiainam-pirenena: ho sahiny sy ho vitany ve ny handamina izany amin’ny ara-dalàna?